Tompon'ny demonia — Trip LEE - OFISIALY SITE
Noho izany, rehefa manomboka miresaka momba an'i Jesosy, ary rehefa manomboka miresaka momba an'Andriamanitra ny olona indraindray mieritreritra ao amin 'ny sokajy. Dia mieritreritra ny rehetra izao ho toy ny cosmic ady eo amin'Andriamanitra sy ny Devoly. Ary tahaka ny rehetra ny toerana tena tantara, isika niandry ny farany hahita izay mandresy. I Jesosy ny mpandraharaha fotsiny ny tsara fa manantena Fandresena? I Jesosy fotsiny toetra amam-panahy iray hafa ao amin'ny tantara?
Tsara ao amin'ny Filazantsaran'i Marka isika hahazo fahafahana maro mba hahita an'i Jesosy mifandray amin'ny herin'ny ratsy mifanatrika. Noho izany isika dia handeha hijery tantara iray ary miezaka ny hamaly io fanontaniana io. Ary hiady aho fa misy ady mitranga eo amin'ny Jesosy sy ny herin'ny ratsy, saingy tsy ady ara-drariny. Aoka ny hanokatra ho amin'ny Mark 5.
Manodidina io fotoana io ao amin'ny Filazantsaran'i Marka, Tamin'ny fotoana nampianaran'i Jesosy sy ny vahoaka be nanomboka hanangona sy hihaino ny fampianarany. Ary nony hariva ny andro dia nahazo tamin'ny sambo, ary niondrana an-tsambo. Izany no tantara izay tonga ny tafio-drivotra, tahotra ny mpianatra, ary i Jesoa manome fiadanana ho ny rivotra amin'ny teniny, "Peace, hangina. "Ka dia nihaona tamin'ny tafahoatra fanoherana any amin'ny ranomasina sy Jesosy nikarakara azy. Raha vao manomboka mba haka aina izy ireo ankehitriny nihaona tamin'ny fanoherana bebe kokoa.
Andeha mamaky ny andinin-teny, manomboka amin'ny andininy 1.
Ary tonga teny am-pitan'ny ranomasina, ny tany amin'ny tanin'ny Gerasena. Ary Jesosy, nony efa nidina ny fiara niala teo an-tsambokely, avy hatrany dia nifanena taminy ny tao am-pasana ny lehilahy azom-panahy maloto. Nonina teo amin'ny fasana. Ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony, na dia tamin'ny rojo, fa efa matetika no nafatotra tamin'ny gadra sy ny gadra, fa wrenched ny gadra ankoatra, dia novakiny ny rojo vy manorotoro. Tsy misy olona… nanana ny hery… mba handreseko azy. Andro aman'alina eo amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka nitomany foana niteti-tena tamin'ny vato. Ary nony nahita an'i Jesosy teny lavitra eny izy…, dia nihazakazaka ka niankohoka teo anatrehany. Ary niantso tamin'ny feo mahery, hoy izy, "Moa mifaninona akory ianareo sy amiko, Jesosy, Zanak'Andriamanitra Avo Indrindra ô? Mampianiana anareo amin'ny Andriamanitra, aza mampijaly ahy. "Fa dia nanao taminy hoe:, "Mivoaha amin'ity lehilahy, ry fanahy maloto!"Ary Jesosy nanontany azy, "Iza ny anaranao?"Namaly izy hoe, "Legiona no anarako, satria maro izahay. "Ary nangataka mafy taminy mba tsy horoahiny hiala amin'izany tany izany. Ary nisy kisoa andiany ireo dia nandrasana teo an-kavoana, ary izy ireo nangataka taminy, nanao hoe:, "Alefaso izahay ho any anatin'ny kisoa; andeha isika hiditra azy ireo. "Dia nomeny alalana. Ary ny fanahy maloto, rehefa nivoaka, dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andiany, miisa tokony ho roa arivo, ireo nitratrevatreva tamin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina banky ka dia maty tany amin'ny ranomasina. Ary ny mpiandry nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Ary ny olona tonga mba hahita izay no ilay efa nitranga. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka olona, ny izay efa nisy ny legiona, nipetraka teo, nitafy lamba sady ary saina…, dia natahotra. Ary izay efa nahita dia nilaza taminy izay nitranga tamin'ny demonia ny olona sy ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny ny faritra. Rehefa izy hahazo an-tsambokely, ny lehilahy izay efa nanana demonia nifona taminy mba hitoetra ao aminy. Ary tsy hamela azy fa hoy Izy taminy, "Mandehana an-trano ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay be nataon'ny Tompo ho anao, sy ny fomba efa namindrany fo taminao. "Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay be efa nataon'i Jesosy taminy, ary gaga ny olona rehetra. (marika 5:1-20 DIEM)
I. Jesosy fihaonana ny Demon nahazo Man (5:1-6)
Koa raha vao Mivoaka avy ao an-tsambokely ry zareo nihaona noho io lehilahy azom-panahy maloto. Fanahy maloto dia ankapobeny fotsiny ny hoe fomba iray hafa demonia. Io lehilahy io, izay nihaona tamin'ireo teo nozakain 'ny demonia. Ny famaritana ny teny manome ny aminy dia mifofofofo.
Nonina teo amin'ny maty. Izy aleony ny fiangonana, dia ny maty, ho ny fiangonana, dia ny velona. Nanana hery mahery noho ny olombelona, loatra ka tsy afaka misakana azy rojo vy. Izy nanapaka azy fotsiny. Mikiakiaka foana izy ary niantso. Ara-batana izy manimba ny tenany, nikapoka ny tenany, niteti-tena. Ity lehilahy ity tsaina.
Izany Karazana sarotra ho antsika ny sary an-tsaina izany karazana demonia fijaliana amin'izao androntsika izao. iray, satria dia maro amintsika no nitsahatra nino ny mihoatra ny natoraly. ary faharoa, satria ankamaroantsika tsy nahita demonia fijaliana amin'ny olona. Fa tiako anao hampiasa ny saina amiko ho minitra.
Inona no azontsika atao raha nahita io lehilahy io? Mitondra fiara an-trano ianao indray andro, ary nahita rahalahy iray monina ao ny fasana, nikiakiaka amin'ny fanaintainana sy ny fijaliana. Fantatro aho. Aho dia miantso karazana fahefana haharombaka azy. Institutionalize azy izahay. Izy no iray loza ho an'ny tenany sy ny hafa ary tsy ny saina. Mila fanampiana. Tsara ny olona ao amin'ny tany amin'ny tanin'ny Gerasena tsy fantany izay tokony hatao aminy. Niezaka ny rojo azy, fa tsy miasa. Azoko antoka izy ireo natahotra ny ny saintsika.
Misy olona toy izany amin'izao androntsika, izay ara-bakiteny loatra tahaka azy. Amin'ny feo in-doha, ary mahery setra fironana, izay nitetika ny tenany. Isika sokajio fotsiny izany ho adala na ketraka, fa mino aho fa maro ny toe-javatra ity, tsy ny rehetra, fa maro ny toe-javatra ireny dia demonia famoretana. Ary mitovy amin'ny tanàna ny olona ao amin'ny tantara, tsy fantatray izay tokony hatao aminy afa-tsy hiezaka ny handresy azy ireo ary hiaro azy tsy hanisy ratsy ny tenany sy ny hafa. Fotsiny isika manana mandroso kokoa ny fomba hanaovana izany izao. Manana andrim-panjakana sy ny psych paroasy amin'ny efitrano amin'ny padded manda sy ny fanafody.
Ny antony ny craziness dia mihoatra noho ny ratram-po fotsiny ny sasany izay nanova ny toe-tsaina. Hery ara-panahy ratsy efa naka ny vatany ary mampijaly azy! Tsy tia miaina toy izany. Izy no ampahorina. Izy no nalaina, natao voafonja, nampijaliana manohitra ny sitrapony.
Demonia Tohero an'Andriamanitra sy ny fikasany
Aza mety hofitahina ianareo rahalahy sy anabavy. Demonia no tena. -Belona izy ireo ara-panahy ianao. Ny ratsy ry zareo dia miasa manohitra ny fikasan'Andriamanitra. Ao amin'ny Filazantsaran'i Marka, Jesosy dia manana be dia be ny hazakazaka-ins amin'ny demonia. Manana tena mitovy zava-nitranga ao amin'ny toko faha- 1. Ary ny ankamaroan 'ny fotoana ao amin'ny Filazantsara demonia no mampijaly ny olona, ​​ary miezaka ny handrava ny zavaboary. Miaraka amin'ity lehilahy manokana, izy ireo dehumanizing azy. Miezaka izy ireo mba handrava ny endrik 'Andriamanitra tao Aminy. Demonia mikatsaka ny hanafoana sy misakana ny fikasan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra efa, amin 'ny zony hitondra, namela ireo hery ratsy ho any am-piasana.
Demonia 'ny asa dia tsy mijery fotsiny toy izany karazana ny fananany sy ny fijaliana aza. Arak'izany, indwelled amin'ny mpino ny Fanahy Masina tsy azo. Na izany aza anefa izy ireo miasa manafika anay. Maka fanahy antsika izy ireo amin'ny ota. Fampianaran-diso izy ireo niely. In 1 Timothy 4, Paoly miantso fampianaran-diso ny fampianarana ny amin'ny demonia.
Demonia no tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny ny ratsy eo amin'izao tontolo izao. Mazava ho azy fa mbola tompon'andraikitra izahay izay manaiky ny fahefany. Ary izy ireo ny fahavalony Andriamanitra velona.
Ny olona Mihazakazaka manatona an'i Jesosy (5:6)
Back to ny olona. Ary ny demonia hery tsy tohanao hiady eny. Tsy nisy olona afaka hamonjy azy. Izy Efa any am-pasana toy ny lavitra ny olona araka izay azo atao. Fa raha mahita an'i Jesosy eny amin'ny lavidavitra dia nihazakazaka ho Azy ary nianjera teo anatrehany Azy.
Io andalan-teny sarotra mahazo kely eto satria hiteny ny demonia izany Lehilahy, fa Amiko, ny andinin-teny mitarika antsika hino fa ny olona avy amin'ny fanaraha-maso, rehefa nihazakazaka Jesosy. Hitany i Jesosy, ary fantany fa i Jesosy angamba afaka manao zavatra mikasika ireo demonia izay hampijaly azy. Angamba Jesosy dia afaka hanafaka azy amin'ny fampahorian'ny. Nahita ny mety hisian'ny fanampiana ary nihazakazaka amin'ny vintana.
Dia afaka mianatra zavatra avy amin'ny demonia ny olona eto. Tsy fantany Ahoana na iza na iza afaka hamonjy azy, fa toa fantany izay afaka hamonjy azy. Ny sasany amintsika dia mila ho tonga ihany io teboka ny brokenness, izay zavatra rehetra azontsika atao dia mihazakazaka an'i Jesosy. Mila intsony ny sitrapontsika mijery ny fahefana, amin 'ny vola, amin 'ny namana, ary mila mihazakazaka an'i Jesosy! Jesosy antso, "Mankanesa atỳ amiko ianareo rehetra izay reraka sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo. " Tsy fantatsika ny fomba Ho ho voavonjy, Fa fantatsika iza no afaka manao izany.
Toy izany koa, rehefa mifandray amin'ny ara-tsaina ry namana izay miovaova. Aza hanaratsiana azy ireo, mankahala azy, haneso azy ireo sy mihomehy azy ireo. Tokony hamindran'ireo fo aminy;. More noho ny zavatra hafa, dia tokony ho afaka. Tokony hanompo azy holistically, mampiasa fanafody raha ilaina, fa nanondro azy ireo ho any amin'i Jesosy ny fanafahana. Ary mivavaha ho azy ireo mba hihaona Aminy. Mila ny fihaonana amin'ny Tompo. Fanafody dia afaka handresy antsika, ary torohevitra afaka manampy antsika hieritreritra mazava kokoa, fa i Jesosy ihany no afaka ho antsika rehetra.
Mamelà ahy hifandray ny sainy ho amin'ny faritra hafa ao an-toerana.
II. Ny demonia Mitenena (5:7-13)
Raha vao ny olona lavo teo anatrehan'i Jesosy izy, mitaraina, "Moa mifaninona akory ianareo sy amiko Jesosy, Zanak'Andriamanitra Avo Indrindra ô? Mampianiana anareo amin'ny Andriamanitra, aza mampijaly ahy!" Ny andinin-teny milaza fa mitaraina fa avy satria i Jesoa nanao hoe:, "Mialà aminy ry fanahy maloto." Izany dia mampiseho antsika fa izany no ny fanahy maloto tao amin'ny niteny.
Ankehitriny dia efa efa nametraka fa i Jesosy sy ny demonia dia tsy mitovy eo amin'ny lafiny. I Jesosy no ilay Zanak'Andriamanitra sy ny demonia dia samy manohitra ny fikasan'Andriamanitra. Koa aoka isika hiezaka ny hametraka izany ho fomba fijery.
Izany dia ho toy ny mandritra ny ady. Ary aoka ny hoe tany hafa manana POWs sy ny andian-tafika Amerikana tonga mba hamonjy azy ireo sy ny mpiambina hoe:, "Ah US Army? Ny olona izay manao eto? Afaka fotsiny dia aoka isika hanao ny zavatra azafady? Aza handratra antsika!"Moa ve tsy ho adala? Toy, "Tsy izao va ny ady? Tsy tokony ho ady ianao fa tsy mangataka?"Fa izao manambara fa tsy ara-dalàna ady. Misy zavatra hafa momba izany ady.
Koa tiantsika ny hijery zavatra efatra izao fihaonany Jesosy, mba hampahafantarana momba ny demonia sy ny fifandraisany amin'i Jesosy.
1. Fantatr'izy ireo hoe iza Izy
Ny demonia dia tsy manana ny manontany iza izany dia nitsangana teo anoloan'ny azy. Raha vao ny hahita Azy izy ireo nahalala Azy ho an'i Jesosy. Milaza izy ireo Izy no Jesosy, ny Zanaky ny Avo Indrindra. Tsy fotsiny miantso azy amin'ny anarany fa mahafantatra ny toe-.
Izany raha ny marina toy ny feo be ny fitanisan-keloka i Petera ao amin'ny Matio 16 fa i Jesosy no "ny Kristy, zanak'i Andriamanitra velona. " Raha ny marina ny demonia vao nanambara ny fahamarinana 'Andriamanitra. Ary izy ireo hahatakatra kokoa ny tena zava-mandrakizay noho ny Mampiaiky sy ny olona manodidina. Fantatr'izy ireo. Na izany aza, izy ireo nikomy.
Izay Mino aho fa ny mampatahotra dia mampiseho antsika ny fahamarinana. Ry rahalahy sy anabavy, dia afaka nahalala hoe iza i Jesosy, nefa tsy nahalala an'i Jesosy. Mety tonga Summit Fiangonana isaky ny faran'ny herinandro. Mety ho ao amin 'ny seminera. Mety hihaino ny rehetra vakina isan-peo sy ny teolojia boky. Fa tsy mihevitra, satria afaka milaza izay Jesosy no, fa ianareo no mahafantatra Azy.
Ny fahafantarana Azy dia mifandray amin'ny lalina, fifandraisana akaiky - fifandraisany sy be fitiavana ary matoky amin'ny lalina ambaratonga. Ny fahafantarana ny momba Azy na inona na inona mihoatra noho ny zava-misy tsianjery. Ny fanaovana tsianjery ny zava-misy dia tsy izay efa niantso antsika hanao. Ary Andriamanitra dia tsy nanaitra amin'ny boky smarts. Afaka milaza ny tena zava-? Mety aminao; dia afaka ny demonia.
James 2:19 hoy i, "Mino ianao fa Andriamanitra dia iray ihany; mba manao soa. Na dia ny demonia koa mba mino, ka dia mangovitra!" Raha ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy nitarika ho amin'ny fiainana niova, ianao dia tsy tsara kokoa noho ny demonia. Ny tena finoana dia mampiseho ny.
2. Fantatr 'izy ireo Izy no hanohitra azy ireo
Hoy izy, inona no mba ataovy amiko? ankapobeny, Nahoana ianareo no eto? Hamela antsika irery! Fantany fa i Jesoa, ny Zanaky ny Avo Indrindra tonga Andriamanitra mba hitondra ny Fanjakan'Andriamanitra. Fantatr'izy ireo i Jesosy no tonga mba hanaisotra ny ratsy rehetra sy ny havaoziko ny zavatra rehetra. Fantatr'izy ireo fa ahitana ny fandringanana. Fantatr'izy ireo fa amin'ny farany, dia ho ringana izy ireo, ary i Jesoa Kristy no hanjaka.
3. Fantatr 'izy ireo Izy no mahery noho ireo
Milaza izy ireo fa ny anarany Legiona no. Izany dia natao mba hampisehoana fa misy maro ireo. Tany Roma ny Legiona dia dimy ho enina arivo miaramila. koa, dia mahita fa tena matanjaka izy ireo. Miresaka izahay, fara fahakeliny 5,000 demonia. Na izany aza, dia mangataka famindram-po.
Tsy misy antony noho ny tahotra raha mahery vaika kokoa noho ny fahavalo, na raha toa ianao manana vintana mihitsy aza.
Asa ianao raha efa nahita dudes izay miresaka be lalao sy mandeha manodidina amin'ny boribory nefa tsy hahita azy ireo ady? Matetika ny olona mahalala raha tena tsy manana fahafahana handresy. Izao no hitantsika eto. Inona no hitantsika dia malemy, resy fahavalo nangataka famindram-po.
4. Fantatr 'izy ireo fa Izy no ny fahefany
Fantany fa tsy maintsy mangataka ny fahazoan-dalana. Tsy mangataka alalana avy amin'ny mitovy. Rehetra manerana ny Soratra Masina hery ratsy mila ny fahazoan-dalana na inona na inona. Eritrereto ny tantaran'ny Job. Satana mila ny fahazoan-dalana mba hikasika an'i Joba, ary navela hanao ihany no betsaka araka an'Andriamanitra dia mamela.
Izy ireo tsy afaka mandeha na aiza na aiza, na manao na inona na inona raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy Jesosy. Azonao sary an-tsaina ny zavatra izao tontolo izao ny mety ho tahaka raha tsy nosakanany? Raha nanana izany ny fomba izy ireo mampijaly antsika rehetra tahaka ny nataony io lehilahy io. Fa Andriamanitra tsy mamela azy ireo ary tokony hidera Azy noho ny.
Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra, any an-danitra sy ny eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na mpanapaka, na manam-pahefana Andraraho no nahariana ny zavatra, sady ho Azy. (Kolosiana 1:16 DIEM)
Ireo demonia no nahariana sy ho an'i Jesosy. Izy ireo mpikomy, fa mbola ampiasaina toy ny pawns lehibe ao amin'ny drafitra mba hiseho eny.
Ny herin 'ny tenin' i Kristy dia tena amin'ny miseho eto. Tahaka an-toerana rahateo fa niaraka "Peace, hangina. "Hitantsika ny fahefan'ny Tenin'Andriamanitra. I Jesosy no Andriamanitra, ary raha miteny Izy ka mandidy azy dia tsy maintsy atao. Tsy manontany, handidiany. Ny tenin'i Jesosy dia mahery vaika kokoa noho ny fitaovam-piadiana mavesatra indrindra. Ny Teny 'i Kristy dia mahery vaika! Izany no mihazona izao rehetra izao miara-!
Ao amin'ny tantara talohan'ny izany, dia nampiseho ny maha-Tompo ny zavaboary. Ny tantara rehefa afaka izany, dia maneho ny maha-Tompo izy ny aretina. Jesoa no Tompon'izao rehetra. Ary mamonjy-pamindram-po Izy.
Ry rahalahy sy anabavy, tsy maintsy mino amim-piekena mafy fa i Jesosy no tena Tompon'ny tompo. Milaza ny Baiboly fa tsy misy na inona na inona misy izay tsy eo ambany fahefan'i Jesosy Kristy. Tsy misy hazo, tsy misy feo, tsy misy bibikely, tsy misy biby, tsy mino an'Andriamanitra, tsy Muslim, tsy Hindu, tsy misy anjely, tsy misy demonia, tsy misy devoly izay tsy latsaka noho sy eo ambany fahefan'i Jesosy Kristy. Mety hamela fikomiana Andriamanitra mandritra ny fotoana voafetra, ary Mety hamela azy ireo handeha afa-tsy ny manana fahefana, mandritra ny fotoana fohy, fa Jesosy dia havaoziko ny zavatra rehetra, ary Izy no hitondra ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony.
III. Nanafaka ny olona i Jesosy (5:14-20)
By ny teny mahery Jesosy no namonjy ny olona. Eny, nanary ny demonia.
Rehefa nahita azy ny olona dia nipetraka teo nitafy lamba sady ary saina. Amin'ny indray mipi-maso ny zava-drehetra niova. Ny fotoana farany dia nahita azy dia fanorotoroana ny tenany ary mandrakariva nikiakiaka. Ary izy ho ara-dalàna toy ny ahy sy ianao.
Amin'ny alalan'ny famindram-pony i Jesoa naverina io lehilahy io. Jesosy dia tonga amin'izao tontolo izao mba hamerina ny zavaboary izay ka simba ny ota sy ny fahafatesana. Izy no nampihavana zavatra rehetra ho an'ny Ray.
Ary mampiseho famindram-po Izy ny ity lehilahy ity ary mamonjy Azy. io lehilahy io,, na izy nampahorina, dia mpanota toa ahy sy ianao. Tsy mendrika ny ho voavonjy.
Fa Jesosy tsy hanafaka mifototra amin'ny zavatra mendrika. Tsy miandry anao mba hahazoana azy eo anoloan'ny miasa ao amin'ny famindram-po Izy. Be famindram-po i Jesosy, satria i Jesosy no be famindram-po. Izy no tia sy mikarakara ny zavaboariny.
Tsy misy maha ara-panahy tena mahery, tsy misy ota dia matanjaka, na inona na inona izay mihoatra noho ny hery sy ny fahefan 'i Jesoa. Noho ny zavaboary rehetra dia manaiky Azy. Ary rehefa Izy no hanafaka, Dia manao izany avy amin'ny famindram-po ny amin'ny, hatsaram-panahy, sy ny fahasoavana.
Jesosy dia afaka hanafaka antsika amin'ny tena na inona na inona: tsy misy, fiankinan-doha, fahaketrahana, fanaintainana, fanararaotana, ratsy fanambadiana, na inona na inona dia mety ho. Jesosy no Mpanasitrana sy ny mpanafaka. Mety mijery fanantenana, fa hitantsika ny nanolotra herin'i Kristy eto.
IV. Ny fihetsiky ny olona (5:17-20)
Tsy vitan'ny no ny demoniaka nanana nihaona tamin'i Jesosy, Fa ny tanàna rehetra dia manana. Maro tamin'izy ireo nanatri-maso ny zava-nitranga rehetra, ary ny olon-kafa nandre momba izany. Ahoana no mamaly ny olona rehetra ny nihaona tamin'i Jesosy?
Raiki-tahotra ny Mampiaiky! Izy ireo mbola tsy nahita toy izany hery sy fahefana. Angamba tezitra ry zareo fa ny kisoa nandositra eny amin'ny hantsana. Tsy fantany ny fomba hamaliana azy! Izy ireo raha ny marina mangataka azy mba hiala!
Maro ny olona ankehitriny no tsy tia an'i Jesosy. Ary mampalahelo ny ara-dalàna lamin'ny fiainana. Jesosy mitady ny olona tsy mahazo aina. Little comfy Jesosy tao amin'ny boaty tsy misy. Raha tadiavinao Azy, foana ianao mitady ny fiainana manontolo. Ary mampihorohoro ny zavatra ny. Izy nandrava maizina sy miantso antsika ho amin'ny mazava.
Ny teo aloha namaly demoniaka amin'ny fankasitrahany. Te hanaraka an'i Jesoa, ary mangataka mba hitoetra ao aminy. Jesosy nilaza taminy mba hijanona sy hilaza amin'ny hafa. Izy nankatò Azy. Izany no valin-tsara any amin'ny iray nihaona tamin'i Jesosy.
Oviana no fotoana farany no nilaza ny hafa ny zavatra nataon'ny Tompo ho anao? Inona no Izy no namonjy anareo tamin'ny? Tsy voatery ho goavana toy ny demonia fananany, saingy tsara. Mety ho fanafahana avy amin'ny fahotana manokana tolona. Mety ho fandresena ny fakam-panahy. Mety ho manasitrana amin'ny aretina. Na milaza ny hafa fotsiny ny fomba ny namonjy anao. Lazao ny hafa!
Hitantsika eto fa azo atao ho antsika ho vavolombelona ny hery, fahasoavana, sy ny fahefan 'i Jesoa sy ny mbola tsy ho mpianatra. Ny sasany mamaly ny tabataba, ny hafa amin'ny fankahalana, ny sasany amin'ny tehaka fotsiny fotsiny. Tsy misy amin'ireo no valiny Andriamanitra miantso.
Ary ny fitaovam-piadiany ny mpanapaka sy ny manam-pahefana, ary nataony ho fahamenarana, amin'ny alalan'ny firavoravoan'ny azy ao aminy. (Kolosiana 2:13-15 DIEM)
Na i Jesosy nandresy ady maro manohitra ny fahavalo nandritra ny fotoana eto an-tany, Ny faratampony resy ny ratsy mitranga amin'ny faran'ny Filazantsaran'i Marka. Ary clenched ny ady teo amin'ny hazo fijaliana. Ary niseho toy ny hoe efa resy indray mipi-maso. Fa Izy dia hitsangana amin'ny hery.
Tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy nametraka demonia ireo hery, na ny mpanapaka ary ny manam-pahefana miantso azy ireo i Paoly ao amin'ny Kolosiana, ho fahamenarana. Dia menatra azy. Nasehony ny fomba rehetra malemy izy ireo. Dia voafafa ny vokany. Ary nanao ny farany kapoka- mialoha.
Ary rehetra ny miodina dia zava-poana. Saika toy ny Repoblikana primaries. Tsy nisy fomba hafa mety handresy ry zalahy, Hoy foana anefa manosika miaraka mamitaka ny tenany. Ireo demonia mbola hikomy amin'Andriamanitra, na dia efa mazava tsara efa resy. Nanomboka ny asa nampanantenaina fahiny. Ary rehefa miverina Izy no farany handresy ny fahavalony.
Ihany amin'ny alalan'ny mamaly ny asany teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fibebahana sy ny finoana no mahazo ny handray soa avy amin'ny fahefana, fahefana, ary ny fandresen'ny Jesosy. Izy no Tompon'izao rehetra izao. Diniho ny ny fo, ary jereo ny fomba hamaliana izany Tompo.
Izany no karazana Tompo aho fa te-hanaraka. Izay no hanafaka, ny Mpanjaka, ny Tompo, ny Mpitondra, ary feno famindram-po ny Mpamonjy. Ny vaovao tsara mitaky valiny.
Ity faran'ny herinandro ity, ratsy mitranga ho lohalaharana ny saintsika. Ny asa ratsy mahatsiravina nitranga in Colorado. Tokony malahelo. Tokony ho tezitra. Fa tsy tokony hanontany tena raha tsy Andriamanitra na handresy amin'ny farany. Ny farany kapoka efa namely.
Jesosy avo ny ratsy teo amin'ny hazo fijaliana. Miezaka ho ao aminy. Lavo eo anatrehany. Matokia Azy. hanaraka Azy. Miderà Azy. Lazao hafa.
KG • Aogositra 20, 2013 amin'ny 5:01 aho • navalin'i
Misaotra anao noho ny zavatra ataonareo Trip!!! I “fitiavana” fa mirehareha vaovao Logo. Azonao napetany teo amin'ny akanjo na ny entana sasany. Ho tia ny hahazo T-Shirt amin'izany amin'ny. :)
miresaka momba: My Article Vakio (8-19-2013) | My Daily nieritreritra